Geological Tourism: Ngwaahịa ndị njem ọhụụ na East Africa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Geological Tourism: Ngwaahịa ndị njem ọhụụ na East Africa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ngorongoro Conservation Area Authority (NCAA) ugbu a na-emepe ụlọ obibi ndị njem nleta na ụlọ ọrụ ndị ọbịa ndị ọzọ na Geopark iji dọtakwuo ndị njem nleta, ma ndị si mba ọzọ na ndị ọbịa.
Geotourism na-eji ihe nketa ala na mmekorita ya na ihe omumu na omenala mee ka odidi nke ebe, dika gburugburu, esthetics, omenala na mmepe mmepe nke obodo na Ngorongoro Conservation Area na Northern Tanzania bu otu n'ime ebe ndi mmadu na-eme njem nleta na East. Africa
Nationstù Na-ahụ Maka Mmụta, Sayensị na Ọdịbendị nke Mba Ndị Dị n'Otu (UNESCO) họpụtara Ngorongoro-Lengai dị ka ebe Geopark n'April 17, 2018 ka ọ bụrụ nanị Geopark ndị njem nleta na Africa na ndịda Sahara Desert
Njirimara ihe omumu bu ihe ndi mmadu na-eme njem nleta na Northern Tanzania na mpaghara ndi ozo na East Africa ebe ihe ndi mara mma di.
Mpaghara Ngorongoro Conservation na Northern Tanzania bụ otu n'ime ebe ndị ama ama na-adọrọ mmasị na njem nleta na East Africa, ebe njirimara ala agbakwunyere uru nke ngwaahịa ndị njem na ebe ahụ, na mgbakwunye anụ ọhịa.
Ejikọla usoro ala ndị a dịka Ngorongoro Lengai Geopark n'ime Mpaghara Ngorongoro Conservation nke anụ ọhịa bara ụba.
Ihe kachasị mma n'etiti ebe ndị a na-ekpo ọkụ na mbara igwe bụ Ugwu Oldonyo Lengai - ugwu mgbawa na Tanzania. Onye ndu ahụ duuru na nso ugwu ahụ iji nye m ohere ihu elu dị ka cone ebe ọ na-agbapụ ọkụ ya mgbe ọ na-agbawa.
"Ugwu Chukwu" n'asụsụ Maasai, Oldonyo Lengai bụ ugwu mgbawa pụrụ iche na-adọrọ adọrọ nke dị elu karịa Ndagwurugwu Rift East East.
Ngorongoro Conservation Area Authority (NCAA) ugbu a na-emepe ụlọ obibi ndị njem nleta na ụlọ ọrụ ndị ọbịa ndị ọzọ na Geopark iji dọta ọtụtụ ndị njem nleta, ma ndị si mba ọzọ na ndị ọbịa, NCAA Cultural Heritage Manager, Maazị Joshua Mwankunda kwuru.
“Itinye ego na Geopark a ga-eme ka ndi njem nleta na-eleta anumanu a na-echekwa ohia n’akuku a nke Afrika ka ha noo noo ogologo”, Mwankunda kwuru.
M si na ndagwurugwu nke Oldonyo Lengai Volcanic Mountain, mụ na onye ọkwọ ụgbọ ala m Patrick gafere ịga leta Malanja Depression, nke mara mma dị na mpaghara nchekwa.
Malanja Depression bụ ebe mara mma na ọmarịcha dị na mpaghara ndịda nke ugwu Serengeti na ọwụwa anyanwụ nke Ugwu Ngorongoro. Ejiri ịda mba ahụ site na mmegharị nke ala ahụ gaa n'ebe ọdịda anyanwụ, na-ahapụ akụkụ kachasị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ dara mbà n'obi.
Mamụaka Maasai na-ata nnukwu ìgwè ehi, nke ọ bụla nwere ihe dị ka isi 200 nke ewu na atụrụ, n'ime ịda mbà n'obi ahụ. Ahịhịa ahịhịa ahịhịa na ịda mbà n'obi na-enye ezigbo nri ahịhịa maka anụ ụlọ, na mmiri iyi mmiri n'akụkụ oke ndịda, maka anụ ọhịa, anụ ụlọ na ezinụlọ Maasai.
Maasai hometeads na-eme ka mpaghara a dị mma n'ime Malanja Depression ma nye ndị ọbịa ahụmịhe ọdịbendị, na-enye usoro mmekọrịta n'etiti mmadụ, anụ ụlọ na anụ ọhịa; niile ịkekọrịta ọdịdị ya.
Nasera Rock bu ihe omuma mara nma nke m jisiri ike bia. Ọ dị mita 50 (165) dị elu inselberg nke dị na ndịda ọdịda anyanwụ akụkụ ugwu ugwu Gol n'ime Ngorongoro Conservation Area.
Nkume a na-acha uhie uhie bụ gneiss nke a na-agbanye magma granitic a wụrụ awụ ma mezie ka ọ ghọọ pink granite. O buru ụzọ nye mmadụ mmalite.
N’ọgba ndị a, ihe akaebe egosila na mmadụ mbu biri n’ebe ahụ ihe dịka afọ 30,000 gara aga. N’ime ọgba ndị a, a chọtara ngwa ọrụ okwute, iberibe ọkpụkpụ na arịa ndị ọzọ.
Olkarien Gorge bụ nke ọzọ, mara mma ma ọ bụ ọdịdị ala mara mma nke m nwere ịga nke ọma. Ọ dị omimi ma dịkwa warara nke dị ihe dị ka kilomita asatọ n’ogologo.
Ogwugwu ahu bukwa otutu otutu ugole na-efe. Maasai nweta ala ntutu ha (Okaria) site na ọmarịcha a.
Akụkọ banyere ala Ngorongoro Lengai Geopark malitere na 500 nde afọ gara aga mgbe e guzobere aja aja granite na North ugwu Gol na West na Ọdọ Eyasi.
Geoparks na-elekwasị anya na iwulite ojiji nke ihe nketa geological na ọdịdị ala dị ka ihe ndị njem iji dọta ndị njem nleta na-aga Africa, ebe ụdị ihe ebube ndị a dị.
Eductù Na-ahụ Maka Mmụta, Sayensị na Ọdịbendị nke Mba Ndị Dị n'Otu (UNESCO) họpụtara Ngorongoro-Lengai dị ka saịtị Geopark n'April 17, 2018 ka ọ bụrụ nanị Geopark ndị njem nleta na Africa na ndịda Sahara Desert.
Geopark nke ọzọ na Africa bụ M'Goun Global Geopark na Morocco. Enwere 161 Geoparks n'ụwa niile, na mba 44 edepụtara n'okpuru UNESCO dị ka saịtị nketa ụwa.
Ogo nke Ngorongoro n'ozuzu buru oke ibu, Ngorongoro Crater kpuchiri ebe dị kilomita 250, Olmoti Crater 3.7 kilomita na Empakai kilomita 8.
Ngorongoro- Lengai Geopark na-abụzi ihe ọzọ dị mkpa mere ndị njem nleta ga-eji na-enubata ugwu ya na ugwu mgbawa kachasị elu na Africa.
Geotourism bụ njem nlegharị anya nke ọdịdị na-elekwasị anya n'iji ihe nketa ala na ọdịdị ala dị ka ihe ndị njem na-adọta ndị njem nleta, na-enye ndị ọha na eze na ụmụ akwụkwọ ihe ọmụma banyere ala ma na-agba ume ekele ma zụlite echiche nke ebe na uru maka nchedo.
Geotourism na-eji ihe nketa ala na mmekorita ya na ihe omumu na omenala mee ka odidi nke ebe, dika gburugburu, esthetics, omenala na mmepe nke obodo.
Ndị Ngorongoro Conservation Area Authority na-enye ọtụtụ ntinye ego na ebe obibi site na ụlọ oriri na ọ touristụ touristụ ndị njem nleta dị elu na ebe obibi, ogige ndị na-adịgide adịgide, ogige ndị nwere ụlọikwuu, ogige ndị na-agagharị agagharị na ebe ezumike maka ndị itinye ego gụnyere ndị obodo na ndị mba ọzọ.